Uphuhliso lwe-nanotechnology kunye nee-nanomaterials zibonelela ngeendlela ezintsha kunye nemibono yokuxhaphaza imveliso ye-antistatic. Ukuqhutywa, i-electromagnetic, i-super absorptive kunye ne-broadband iipropathi zezinto ze-nano, zidale iimeko ezintsha zophando kunye nophuhliso lwempahla yokufunxa. Imichiza yefayibha yokunxiba kunye nekhaphethi yefayibha yemichiza, njl., Ngenxa yombane ongashukumiyo, ukuvelisa iziphumo ngexesha lokukhuhlana, kwaye kulula ukufunxa uthuli, olubangela ukuphazamiseka okuninzi kubasebenzisi; Amanye amaqonga okusebenza, i-cabin welding kunye nezinye iindawo zomsebenzi wangaphambili zithambekele kwiintlantsi ngenxa yombane ongagungqiyo, onokubangela ukuqhuma. Ukusuka kwimbono yokhuseleko, ukuphucula umgangatho weemveliso zefayibha zeekhemikhali nokusombulula ingxaki yombane ongashukumiyo yimisebenzi ebalulekileyo.
Ukongeza i-nano TiO2, nano ZnO, nano ATO, nano AZO kunye nano Fe2O3 i-nano powders eneempawu ze-semiconductor kwi-resin iya kuvelisa ukusebenza kakuhle kwe-electrostatic shielding, eyanciphisa kakhulu umphumo we-electrostatic kwaye iphucula kakhulu ukhuseleko.
I-antistatic masterbatch elungiselelwe ngokusasaza ii-nanotubes zecarbon (I-MWCNTs) kwi-anti-antistatic PR-86 enokuthi ivelise i-PP. Ubukho beMMCNTs bonyusa inqanaba lokwahlulahlula isigaba se-microfiber kunye nefuthe le-antistatic masterbatch. Ukusetyenziswa kwee-nanotubes zekhabhoni nako kunokuphucula amandla e-polypropylene fibers kunye ne-antistatic fibers ezenziwe ngemixube ye-polypropylene.
Sebenzisa i-nanotechnology ukwenza i-adhesives eqhubayo kunye nokwaleka okuqhubayo, ukwenza unyango lomphezulu kumalaphu, okanye ukongeza i-nano yentsimbi ye-powders ngexesha lenkqubo yokujikeleza ukwenza imicu iqhube. Umzekelo, kwi-arhente ye-antistatic ye-polyester-nano antimony doped tin dioxide (ATO) yokugqibezela iarhente, isasazisi esifanelekileyo esizinzileyo sikhethwe ukuba senze amasuntswana kwindawo e-monodispersed, kwaye iarhente yokugqiba i-antistatic isetyenziselwa ukunyanga amalaphu e-polyester kunye nelaphu ngaphezulu ukuxhathisa. Ubungakanani bokunganyangeki> 1012Ω buncitshisiwe ukuya kubukhulu be- <1010Ω, kwaye isiphumo se-antistatic asitshintshanga emva kokuhlamba amaxesha angama-50.
Imicu eqhubayo enentsebenzo engcono ibandakanya: ifayibha emnyama yeekhemikhali enekhabhoni emnyama njengezinto ezihambayo kunye nefayibha emhlophe yemichiza enezinto zomgubo omhlophe ezifana nano SnO2, nano ZnO, nano AZO kunye nano TiO2 njengezinto zokuqhuba. Imicu ehambisa imithambo emhlophe isetyenziselwa ukwenza impahla ekhuselayo, iimpahla zomsebenzi kunye nezinto zokuhombisa ezihambisayo, kunye nethoni yazo yombala ibhetele kuneentsimbi eziqhubayo ezimnyama, kwaye uluhlu lwesicelo lubanzi.
Ukuba unomdla kulwazi oluthe kratya malunga nano ATO, ZnO, TiO2, SnO2, AZO kunye nekhabhon nanotubes kwisicelo esichasene no-static, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Ixesha Post: Jul-06-2021